Djibouti Iyo Saamaynta Xaaladda Cusub Ee Geeska Afrika, gaar ahaan Itoobiya - #1Araweelo News Network
Maanta waxan BBCda ka dhegaystay in goob ciidan oo ku taala gobolka Tojura ee dalka Jabuuti koox dablay ah ay weerartay dhimasho iyo dhawaana ay jiraan. Alleh ha sahlo eh dagaalada qoomiyadaysan ee dalka Itoobiya waxay u egyihiin kuwo ka sii daraya maalinba maalinta ka dambaysa kana sii gudbaya xataa xuduudihii Itoobiya.
Mustaqbalka dhaw dhulka ay soomaalidu degto halka ugu dhaw in la isla soo jiidhi karaa waa dalka Jabuuti oo aan xamili karin inta ugu yar hadii la isla soo jiidho. Gaar ahaan hadii Qoomiyadda Canfarta oo dhulkoodu hadda sadex dal ku dhex qaybsan yahay ( Itoobiya, Calatariya, iyo Jabuuti) ay u arki arkaan fursad in ay hal dhinaca isugu lugo duwato.
Sida uu u fakarayo Madaxwayne Geelle soomaalidu waa afar isaga oo hadana og in marka Somaliland iyo Somaliya oo iyagu 100% soomaali ah laga reebo labada kale laftoodu ay qoomiyado badan qaranimadooda la wadaagaan iyagoo aan ahayn reer ama reero ee ah qoomiyad soomaaliyeed sidaana lagu ogol yahay loona aqoonsan yahay laguna Ixtiraamo soomaalinimadooda sida Soomaalida Itoobiya iyo soomaalida Kenya.
Nasiib darro siyaasadda Dawladda Jabuuti ayaa sabab u ah in Jabuuti aan loo arkin dhul ay soomaalidu wax ku leedahay balse loo arko uun “Dhulka Canfarta iyo Ciisaha” magaca soomaalina uu noqdo wax aan ka jirin Jabuuti.
Si kastaba xaalku ha ahaado eh dhacdadan lagu weeraray ciidanka nabadgelyada ee Jabuuti maaha wax wayn waxayse u egtahay bilaw. Hadii ay tii ugu horeysay tahay laga yaabaa in aanay ahayn tii ugu dambaysay.
Dhinaca kale waxaynu beryahan dambe la soconay in ay jireen isku dhacyo hubaysan oo dhex marayay ciidamo ka soo kala jeeday labada qoomiyadood ee soomaalida Itoobiya iyo Canfarta Itoobiya iyadoo inta badan ay weeraradu ka soconayeen dhinaca Canfarta. Qoomiyadda Canfarta soomaalida keliya ee ay oodwadaaga yihiin xaga Jabuuti iyo xaga Itoobiyaba waa reerka Ciise dagaalada iyo isku dhacyada hubsanina waxay ahaan jireen caadi iyadoo loo nisbayn jiray inta badan sababo dhinaca isriixa degaanada balse looma nisbayn jirin colaado qoomiyadaysan intii hore oo dhan balse colaadaha qoomiyadaysan ee ka soo cusboonaaday Itoobiya ayuun baa loo nisbayn karaa waana arin ka fiirsigeeda gaarka ah leh.
Sidaa daraadeed Madaxwayne Geelle arinka ugu muhiimsan ee wakhtigan isaga u yaal maaha arimaha uu ku talaxtago ee Somaliland iyo Somalia oo intii ka dambaysay burburkii Jamhuuriyaddii Somaliyeed uu isagu si kasta uga faaiidaystay xaaladdii burburka ilaa uu gaadhay in uu noqdo Madaxwaynaha keliya ee Soomaaliyeed wax badanna ku helay.
Maanta hawsha ugu muhiimsan ee isaga u taalaa waa sidii dalka Jabuuti ee uu Madaxwaynaha ka yahay uga badbaadin lahaa halisaha ku soo foolka leh ee dagaalada qoomiyadaysan ee ka socda dalka Itoobiya oo laga yaabo in ay ka soo gudbaan xuduudaha Itoobiya.
Ta ugu horaysa ee la gudboonina waa ta ugu adag xagiisa oo ah in uu bilaabo dibu-qaabayn siyaasadeed ( political reform) oo degdeg ah oo wax badan ka bedeli kara dhinacyada qaybsiga awoodda (power sharing) iyo dhaqaale ( resource sharing) iyo weliba xakamaynta musuqmaasuqa sidii webi karaar dhaafay karkaarada jebiyay si uu sees adag u dhigi karta dawladnimo iyo qaranimo midaysan oo loo wada dhan yahay, isaga oo tabashootinka qoomiyadda canfartana siinaya tixgelin gaar ah maadaaama ay inta badan dhulka Jabuuti degaan ahaan iyadu leh si uu ugu qanciyo midnimada qaran ee dalka Jabuuti oo ku jiri karta keliya in si cadaalad ah wax loo wada yeesho.